Maxkamadda Gobolka Saaxil Oo Xukuno Kala Duwan Ku Riday Koox Rag Iyo Haween Ku Eedaysnaa Falal Aragagixiso Iyo Dilka Sarkaal Bilayska Ka Tirsnaa | Araweelo News Network (Archive) -
Maxkamadda Gobolka Saaxil Oo Xukuno Kala Duwan Ku Riday Koox Rag Iyo Haween Ku Eedaysnaa Falal Aragagixiso Iyo Dilka Sarkaal Bilayska Ka Tirsnaa
Berbera(ANN)Maxkamadda Gobolka Saaxil ayaa maanta Go’aan kasoo saartay Koox ka kooban 9-qof oo lagu eedeeyey inay ka mid yihiin Shebekada Argagixisada iyo kooxaha ka dagaalama Koonfurta Soomaaliya.Kooxdaa badhtamihii Jun 2010, lagu qab-qabtay xarunta gobolka Togdheer
ee Burco ayaa la qabtay
kadib markii koox Bilayska ka tirsan oo daba socday dad doonayay inay falal ka dhan ah nabadgelyada Somaliland ka fuliyaan dalka, taas oo keentay in la dilo Sarkaalkii watay Ciidanka hawlgalka ku daba jiray, isla markaana dhaawac loo geysto sarkaal kale oo ka mid ah Bilayska gobolka.
Qaar ka mid ah dadkii loo qabtay falkaa iyo kuwii baxsaday oo ku eedaysnaa dilka sarkaal ka tirsanaa oo dhegeysiga dacwadoodu maalmahan ka socotay Maxkamadda gobolka Saaxil ayaa 9 qof oo ku eedaysnaa kiiskaa waxay 4- ka mid ah, Maxkamaddu ku xukluntay dil toogasho ah.
Eedaysanaha koowaad oo ah Axmed Ibraahim Faarax oo lagu ku eedeeysnaa inuu yahay ninkii dilka Toogashada ah kula kacay Sarkaalkii ka tirsanaa Ciidanka Booliska ee Magaalada Burco, laba qof oo kalena dhaawacay markay taariikhdu ahayd 24/6/2010. Ayay maxkamaddu ku riday xukun dil ah, kaas oo goob joog ka ahaa xukunka.
Sidoo kale oo ay maxkamaddu dil ku xukuntay iyaga oo maqan xukuno dil ah ku xukuntay Cabdirakiin Maxamed Xasan, Saleebaan Cabdilaahi Isaaq iyo Xabiiba Dirir Ciid.
Maxkamadda Gobolka Saaxil waxay dilka afartan qof u cuskatay qodobada kala ah 43422 ee xeerka Ciqaabta guud. Sidoo kale waxay Maxkamaddu min hal sano oo xadhig ah ku xukuntay sadex haween ah, Eedaysnayaasha oo kala ahaa Aamina Jaamac Xirsi, Canab Cabdilaahi Diiriye, Raxma Cabdilaahi Cali
Waxaana xukunkooda loo cuskaday sadexdan Haweenka ah Qodobada kala ah 331 xeerka ciqaabta guud, kuwaas xukunkooda lagu sababeeyey inay la shaqeynayeen oo ay gacan siiyeen xubnaha lagu eedeeyey falalka argagixisada.
Maxkamaddu waxay xoriyadoodi dib ugu soo celisay laba haween ah oo kala ah, Kawsar Jaamac Maxamuud, Nimco Maxamuud Dirir, kadib markii lagu waayey dambigii loo heystay ee ay ku eedysnaayeen. Sida uu sheegay Garsooraha Maxkamaddu.
Guddoomiyaha Maxkamada Gobolka Saaxil Ibraahim Ismaaciil Daahir ayaa sheegay inay saaka xukunadda Maxkamadda kala qeyb galeen sadex Garsoore, iyadoo oo ay jireen Qareeno difaacayey dadka xukunka dilka iyo xadhiga ahba ay Maxkamaddu ku riday.
Maxkamadda ayaa go’aanka xukunadda kala duwan ka dib qalabkii lagu soo qabtay dadkaa ku wareejisay ciidanka qaranka Somaliland.